iPhone 7 iyo 7 oo lagu daray: Dareenka ugu horreeya marka la isku dayayo | Waxaan ka socdaa mac
Sidaad qiyaasi karto, tani waxay noqoneysaa fikrad ra'yi, iyo waliba shaqsi ahaanba. Maanta waxaan ka hadli doonaa iPhone 7 iyo 7 oo lagu daray, kuwa ku cusub Apple Store. Kuwo badan ayaa ah faallooyinka iyo xogta ay isticmaaleyaashu bixiyeen isla marka ay helaan terminal-kooda. Intaa waxaa dheer, warbaahinta iyo baloogyada ayaa ka hadlay waxyaabaha muhiimka ah iyo wararkooda. Waxaan sidoo kale aragnay qaar kale oo aan sanduuq aheyn oo tijaabinta iska caabinta iyo kaamirooyinka ay durba bilaabeen.
Hagaag, Muxuu celcelis ahaan adeegsaduhu ogaadaa ama dareemaa marka la tijaabinayo iPhone 7 iyo 7 oo lagu daray? Tani waxay ahayd waayo-aragnimadayda markii aan tijaabinayay iyo farqiga aan ku arkay inta udhaxeysa terminal-kan cusub iyo iPhone-keyga hadda jira 6. Waxaan horeyba kuugu sheegayaa in kamaradda laba-laabka ahi aysan ahayn waxa aniga aad iiga yaabisay.
1 Naqshadeynta iyo muuqaalka muuqaalka ee iPhone 7
2 iPhone 7, waa maxay wararka kuugu fiican?
Naqshadeynta iyo muuqaalka muuqaalka ee iPhone 7
Sida saxda ah hal mar oo dheeri ah. Sidee bay u maareeyeen inay dhigtaan annaga oo aan dhihin waa isku mid? U beddelka cirifka booska madoowga madow ee dadka isticmaala qaarkood jecelyihiin kuna darayaan midab qaali ah oo ka bilaabanaya moodooyinka 128Gb. Madow dhalaalaya ayaa soo jiitay dareen badan waxaana laga yaabaa inuu yahay kan ugu badan ee la dalbado, laakiin dhammeystirkaani ma ahan wax cusub ama kacaan ah.
Waxay u tuuraysaa shaashadda qiiqa xaqiiqda inay tahay naqshad muxaafid ah. Taasi miyey saameyn ku yeelataa ra'yigayga ku saabsan aaladda iyo dareenkeygii ugu horreeyay? Haa, iyo wax badan. Waxay i siinaysaa dareen ah inay tahay isla wixii aan ku qaatay jeebkayga. IPhone 6 leh 3D Touch, awood dheeri ah, kaamirad ka fiican iyo taxane ah qaabab cusub. Laakiin terminaalkeygu sifiican ayuu iigu shaqeeyaa, miyay tahay inaan iibsado iPhone 7 kaliya maxaa yeelay way kafiican tahay? Maya, maxaa yeelay ma dareemi doono faraqa waxayna i siin doontaa dareenka ah inaan lacag luminayo. Lacag aanan u baahnayn in aan u tudho. Naqshad isku mid ah ayaa u dhiganta cusbooneysiin la'aan.
Apple waxay leedahay suuq weyn oo ay daboosho. Ma aha oo kaliya isticmaaleyaasha hal abuurka leh ee leh 6 ama 6s inay go'aansadaan inay cusboonaysiiyaan, laakiin tiro aad u tiro badan oo wali wata iPhone 4, 4s, 5 ama 5s. Dhammaantood waxay u noqon doontaa isbeddel dhab ah waxayna ogaan doonaan faraqa. Dhamaadka maalinta waa terminal aad u fiican oo cajiib ah, laakiin haysashada 6 ama 6s ma arkaysid wax cusub.
iPhone 7, waa maxay wararka kuugu fiican?
Dabcan, Apple wuxuu ballan-qaadayaa batteri dheeraad ah, awood iyo intaas oo dhan. Laakiin xoogaa markii aan ku tijaabineyno dukaanka ma arki doonno faraqa. Taasi waa fiicantahay laakiin ma ahan wax cajiib ah. Caqli ahaan laba sano gudahood waxay awood u yeesheen inay wax badan ka horumariyaan baytariga. Waxyaabaha layaabka leh waxay noqon lahaayeen haddii aysan sameynin. Maxaa iga yaabiyey markaa? Kaamirada, oo leh hal ama laba lenses. Aad u fiican oo weynaanshaha sidoo kale. Labada gadaal iyo horeba way soo fiicnaadeen, laakiin waan ogahay inay sii wadi doonaan inay sii horumariyaan mustaqbalka, aniga ahaanna ma ahan qodobka ugu go'aansan marka la iibsanaayo.
Waxaa naloo sheegay in badhanka Guriga dib loo habeeyay. Maya, iyagu dib uma aysan qaabeynin, ficil ahaan way ka saareen. Muuqaal ahaan waa isku mid, laakiin taabashadu waa ta shaashadda caadiga ah ee leh 3D Touch. Waxyaabaha soo socda ee aan arki lahayn waxay noqon doonaan in lagu daro shaashadda oo la joojiyo booskeeda u gaarka ah ee terminalka. Aad uga raaxo badan oo raaxo leh badhankan cusub ee guriga, sidoo kale waan kuu sheegayaa. Lagu hagaajin karo heerka cadaadiska.
Wax kale? Dhawaaq. Waxaan rabay inaan isku dayo af hayeenka isteeriga ah ee ka soo baxa gunta iyo aagga hore ee kore. Waxaan dhigay iPhone 7 si aan ugu ciyaaro heesta Perfect Illusion ee Lady Gaga oo ku xigta aniga iPhone 6. Labadaba mugga buuxa. Natiijadu waa waxa aniga aad iigu cajaa'ibay dhismahan. In kabadan laba jeer codka iPhone 6 iyo tayo aad u sareysa. Cajiib. Aad u hadal sameeyaha la qaadan karo.
Gabagabadii. Wixii aan horey ugu sheegay maqaalada kale. Haddii aad leedahay a iPhone 6, oo aan hadda lagu iibin dukaamada, ama 6s uma qalanto boodboodka jiilkan. Haddii aad rabto inaad aragto isbeddel wanaagsan, waa inaad sugto. Waxa ugu fiican ayaa ah in terminal-kaaga uu wali shaqeynayo naqshaduna aysan aad uga fogeyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » iPhone 7 iyo 7 oo lagu daray: Dareenka ugu horreeya marka la isku dayayo
Cusboonaysiinta iswaafajinta RAW ee kamaradaha dhijitaalka ah